Dulmarka Qalabka Bixinta - Pandawill Technology Co., Ltd.
Aragtida Guud ee Bixinta
Waxyaabaha aan soo saarno, sida ugu badan ee 80% qiimaha sheyga waxaa soo saari kara BOM (Bill of Material). Waxaan u abaabulnaa dhammaan silsiladda wax soo saarka iyadoo la raacayo shuruudaha iyo siyaasadaha firfircoon ee macaamiisheena, iyadoo la tixgelinayo arrimaha sida heerka looga baahan yahay dabacsanaanta iyo hagaajinta agabka. Pandawill waxay shaqaalaysaa koox heersare ah, koox soocitaan iyo koox soo iibin si ay u maareeyaan saadka iyo soo iibinta qeybaha iyadoo adeegsaneysa nidaam soo saar tayo leh oo waqti la tijaabiyey kaas oo dammaanad qaadaya qeybaha elektaroonigga ah ee aan cillad lahayn.
Markaad ka hesho BOM macaamiisheena, marka hore injineeradayada khibrada leh waxay eegi doonaan BOM:
>Haddii BOM cad yahay oo ku filan si loo helo jumlad (lambar qayb, sharraxaad, qiime, dulqaad iwm)
>Soo bandhig talo soo jeedin ku saleysan qiimeynta qiimaha, waqtiga hogaaminta.
Waxaan dooneynaa inaan dhisno xiriiro muddo dheer ah, iskaashi lala yeesho wada-hawlgalayaashayada wax-soo-saare ee la oggolaaday ee adduunka oo dhan taas oo noo suurta gelineysa inaan si joogto ah u yareynno wadarta qiimaha helitaanka iyo isku-xirnaanta silsiladda iyadoo wali la ilaalinayo heerarka ugu sarreeya ee tayada iyo gaarsiinta.
Barnaamijka maareynta xiriirka alaab-qeybiyeyaasha degdegga ah (SRM) iyo nidaamyada ERP ayaa loo shaqeeyay si loola socdo geeddi-socodka miraha. Marka lagu daro xulashada alaab-qeybiyeyaasha iyo kormeerka adag, waxaa jiray maalgelin la taaban karo oo lagu sameeyay dadka, qalabka iyo horumarinta nidaamka si loo hubiyo tayada. Waxaan haynaa kormeer adag oo soo galaya, oo ay ku jiraan raajada, mikroskoobyada, isbarbardhigayaasha korantada.